Ọ bụghị ihe niile ndị formats na-akwado site na QuickTime ọkpụkpọ na onye ọrụ kwesịrị ịna-elekọta na Apple si website na-kpọtụụrụ na-kasị ukwuu results. Converting .MOV ka MOV bụ ezi echiche na-ege ntị. Ma ajụjụ bụ na ihe mere nke a dị mkpa? QuickTime bụ otu n'ime ihe ndị kasị ama omume niile ugboro na e mepụtara site Apple Inc na ọ na-eme ọrụ a n'ihi na onye ọrụ na ya. Ịbụ mfe onye ọ bụla nke convertors na-achọrọ iji na-enweta usoro mgbanwe. N'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ ya nwere ike na-enye nsogbu esighịkwa eziokwu na ha na-eme adịghị n'isi sekpụ ntị n'okwu ahụ. N'ihi na ihe niile dị otú ahụ ọrụ a paramount omume na-echere na njedebe nke a nkuzi.
Gịnị mere QuickTime tọghata .mov ka MOV?
E nwere ọtụtụ okwu ikpe nke na-gwa n'elu internet nke na-egosi na QuickTime atọghata .mov format na-converted MOVI format ụfọdụ ndị ọrụ okwu a bụ nke na-emenye ihere dị ka disallows ha na-egwu ndị video mgbe niile. The Apple ụka Forum bụ ya mere na-ịchọgharịrị na ndị kasị mma n'ụzọ maka Keywords na-metụtara na metụtara echiche nke mere na achọrọ usoro na-abụghị nanị kpughere ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi ka isi nke nke na-eme needful mgbe na-eme ụfọdụ na ihe ngwọta na-agụ online. The kasị ama eri n'elu internet bụ na URL. N'okpuru ebe bụ ikpe nkọwa dị ka kwa na eri:
M na dị nnọọ emelitere-Mavericks, na nke a ka kpamkpam nkwarụ m !!! M kere ihe nkiri na Adobe Mgbe mmetụta CS5 & CC maka ọnwa, ma nwee ike na-aga ogologo n'ime QuickTime Player na-egwu ma ọ bụ bugharia m videos (dijitalụ signage) ... Ma mgbe eke m .MOV faịlụ, QuickTime ugbu a nwere "tọghata "na ya ma obu hangs ma ọ bụ na-ewe ruo mgbe ebighị ebi .... Nke a bụ ihe nzuzu !? Gịnị na ụwa a na-aga?
Mac Book Pro (Retina, 15-anụ ọhịa, Early 2013), OS X Mavericks (10.9)
The mkpebi na e posted na-egosikwa na faịlụ na na-metụtara Ihe nketa nke ọkpụkpọ a ga-emelitere na mgbe niile ma nke a nwere ike ime iji na-ruo ụbọchị nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi ọhụrụ mkpakọ formats na-tọhapụrụ site Apple na mmekọrita QuickTime ọkpụkpọ. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta ihe omume na mmelite na-akwado niile ọhụrụ teknụzụ. Nke a na-ekwubi isi ihe ọzọ nke na-egosi na onye ọrụ kwesịrị icheta na ọkpụkpọ si n'ezinụlọ nkwado ga-akwụsị n'oge na-adịghị ọ bụ nanị na mmelite na atụmatụ na ga-onye ọrụ ruo akara na mmekọrita a usoro.
Olee otú iji tọghata MOV ka QuickTime?
Ụfọdụ formats bụ ndị dịịrị MOV akpa nwere ike ghara egwuri site QuickTime na ọ bụ n'ihi na eziokwu na mkpakọ codecs na-ma ọ bụghị arụnyere ma ọ bụ ha na-agaghị kwalite na-adọ ha n'ụzọ na-mkpa ọrụ maka nke QuickTime mara maka . Nke a na ngalaba nke nkuzi ga-ewebata ndị kasị magburu onwe na ihe ndị kasị elu omume ịdị ụfọdụ na onye ọrụ na-akawanye kasị mma pụta. N'elu ụzọ iji nweta ala nke nkà na ọrụ bụ iji tọghata usoro onye na-n'ozuzu egwuri site niile QuickTime Player irrespective ha version. Iji nweta ihe mere na-esote nke ndị nkuzi na-atụ aro na-agụ na a ga-soro maka N'ihi na a chọrọ.
Ọ bụ ndị kasị mma convertor na dị online iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi akakabarede ahụmahụ na ọ bụ nakwa ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke usoro ihe omume ndị a ga-kwuru iji nweta ezigbo ighota nke isiokwu:
Akakabarede ọnụego bụ 30X ngwa ngwa karịa omenala convertors na dị ma online na offline.
The Kacha ọhụrụ teknụzụ nke HD na 4K na-akwado site na convertor na-arụpụta bụ nanị ikenyeneke mbiet.
The media center na e agbakwunyere n'ime convertor nke ọkọkpọhi egwu gụgharia ọrụ nye ka onye ọrụ.
The media nkesa nkwụnye nwekwara e ike na-akwado zuru okè DLNA nkwado na e wuru n'ime ọkpụkpọ na-results na bụ nanị ikenyeneke mbiet.
The media center ana achi achi na mgbasa ozi na-streamed n'elu otutu ngwaọrụ n'otu oge ikwe-enweghị atụ results nke assimilate n'ime N'ihi nyere.
Usoro ihe omume na-akwado n'elu 150 dị iche iche formats nke pụtara na onye ọrụ nwere ike fọrọ nke nta tọghata ọ bụla usoro ndị ọzọ na-enweghị ndakọrịta mbipụta.
A nnukwu Forum nkwado a na-nyere ka ọrụ nke-enye ha ohere-atụle ihe iseokwu ma na-nzi mkpebi ebe ọdabara.
Usoro nke converting si MOV ka QuickTime metụtara format dị nnọọ mfe ma nzọụkwụ n'okpuru bụ a ga-agbaso otú na onye ọrụ ọkọkpọhi results:
1. Download na wụnye usoro na mgbe ahụ na-agba ọsọ na-amalite usoro:
2. The tinye faịlụ button bụ mgbe ahụ na-enwe mere na usoro ọganihu na onye ọrụ na-akawanye-enweghị atụ results site na-agbakwụnye faịlụ usoro mgbanwe nke a chọrọ:
3. The mmepụta format bụ mgbe ahụ na-ahọrọ nke mere na usoro Ọganihu n'ihu:
4. N'ikpeazụ tọghatara button bụ na-enwe mere na usoro ihe omume amalite na-arụ ọrụ na nke a kwa na-ekwubi usoro na zuru:
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ a otu n'ime a ụdị omume na e mepụtara ịnọgide na-ele mkpa na-ịda ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ. Ọ na-ukwuu-atụ aro ka niile ndị ọrụ na-eche ihu mbipụta na-atụle n'isiokwu na-a nkuzi na-eme a ụzọ maka ha enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The omume na metụtara atụmatụ ndị dị mfe pụtara, ya mere ọ ga-nọ dị ka akụkụ dị ka a PC na-agba ọsọ ọ bụla OS dị mfe na-ezughị ezu n'ejighị a usoro.
Olee otú Play QuickTime MOV 100% ọma (Yosemite gụnyere)
Olee otú Tinye Audio ka QuickTime Video Files
Olee Otú M Pụrụ Wụnye QuickTime N'ihi Windows 8?
Olee otú Ọkụ QuickTime MOV ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> QuickTime> QuickTime converting .MOV ka MOV? Ọ bụ Crazy!